Real Madrid oo guul soo laabasho ah ka gaartay Sporting Gijon, xilli labo jeer uu shabaqa soo taabtay Isco… + SAWIRRO – Gool FM
Real Madrid oo guul soo laabasho ah ka gaartay Sporting Gijon, xilli labo jeer uu shabaqa soo taabtay Isco… + SAWIRRO
(Madrid) 15 Abriil 2017 – Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa guul soo laabasho ah ka soo gaartay Sporting Gijon oo ay booqatay kulan ka tirsan horyaalka La Liga, waxaana kulankan labo jeer shabaqa tagay Isco.
Weeraryahannada BBC la isku yiraahdo ee Ronaldo, Bale iyo Benzima ayaa kulankan seegay laakiin taasi kama hor’istaagin Real Madrid inay guul ka soo gaarto Gijon.
Real Madrid ayaa goolka looga naxsaday waxaana kooxda martida loo ahaa ee Gijon u dhaliyey 14’daqiiqo Duje Cop, kaddib caawin uu ka helay Mikel Vesga, waxaana Real Madrid ay markaas ka dib la timid goolka barbaraha waxaana u dhaliyey 17’daqiiqo Isco, kaddib baas uu ka helay Vazquez, kulanka ayaana lagu kala nastay barbaro 1-1.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay Sporting Gijon ayaa markale hoggaanka u qabtay ciyaarta waxaana 50’daqiiqo madax u dhaliyey Mikel Vesga kaddib karoos uu soo qaaday Jean-Sylvain Babin, Real Madrid ayaana lagu hoggaamiyey 2-1.
Kooxda tababare Zidane ayaa goolkaas iska soo guday waxaana goolka barbaraha Real Madrid madax ugu dhaliyey 59’daqiiqo Alvaro Morata, kaddib karoos wacan oo uu ka helay Danilo, waxaana uu kulanku sidaas ku noqday barbaro 2-2.
Dhammaadkii ciyaarta kooxda Real Madrid ayaa heshay goolka ay guusha ku qaadatay waxaana u dhaliyey Isco markii kubbad baas ahayd oo uu ka helay Marcelo uu ka soo tuuray farka hore ee goolka kubadda oo joog hoose ku socota ayaana shabaqa gashay, waxaana uu ahaa goolkii labaad ee kulankan uu dhaliyo Isco, Real Madrid ayaana 3-2 kaga soo adkaatay Sporting Gijon.
Real Madrid ayaa guushaan waxa ay u ahayd mid muhiim ah waxaana ay hadda hoggaanka horyaalka ku haysaa 75-dhibcood, halka Barcelona oo caawa ciyaaraysa ay leedahay 69-dhibcood.
SERIE A: Juventus oo guul ka soo gaartay Pescara, kooxda Roma oo barbaro kala kulantay Atalanta & kulamadii kale ee la ciyaaray horyaalka… + SAWIRRO
SERIE A: Kulankii Derby della Madonnina oo barbaro ku dhammaaday… (Kooxaha Inter Milan iyo AC Milan oo is mari waayey) + SAWIRRO